ခေါင်းဆောင်ခေါင်ချုပ်ကြီးကတော့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ခေါင်းဆောင်ခေါင်ချုပ်ကြီးကတော့…
Posted by who who on Oct 11, 2011 in Buddhism, Creative Writing, Science & Religion |9comments
အင်း…အနီးကပ်ရန်သူသုံးယောက်ကိုတော့ တွေ့ပါပြီ။ သူတို့တွေက ဘယ်အချိန် ကတည်းကများ ကိုယ့်ခန္ဓာအိမ်ထဲရောက်နေကြပါလိမ့်ဆိုတာရယ်၊ သူတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်က ဘယ်သူများလဲဆိုတာရယ် သိချင်တာကြောင့် ဒီနေ့ တော့ဖြင့် မနက်မိုးလင်းကတည်းက သူတို့ ၀င်လာမယ့်ပုံစံကို ကြည့်ဖို့ စောင့်နေပါပြီ။
အင်း…အရင်ဆုံးကတော့ ကာမာသ၀က အရင်ဆုံး ၀င်လာပါပြီ။ ဒီနေ့ ဘယ်သူ့ ဆွမ်းကျွေး ကိုတော့ဖြင့် မသွားလို့ မဖြစ်ပေဘူး။ အပြန်ကျရင်တော့ ဈေးဝင်ဦးမှပဲရယ်လို့ စတွေးမိလိုက်တာနဲ့ပဲ အော..ကာမာသ၀ရေ.. ရောက်လာပါပေါ့လား ဆိုတာ တန်းသိလိုက်ပါပြီ။
မကြာပါဘူး…။ အော်..ဒီရက်ပိုင်း အလုပ်တွေများနေတာတောင် ကျန်းမာနေတာ တော်သေးရဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လူကလည်း ကျန်းမာလို့ လှူချင်တန်းချင်တာလည်း လှူနိုင်တန်းနိုင် နေတာကိုက အရတော်တဲ့ ဘ၀ပဲလို့ တွေးလုံးတွေက ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ ဟော…ဒီရန်သူက ဘယ်သူပါလိမ့်မယ်။ သတိနဲ့ ကြည့်လိုက်တော့မှ အော် ကိုယ့်ဘ၀လေးကို ကျေနပ်အောင် လုပ်နေတဲ့ ဘ၀ါသ၀ရဲ့လက်ချက်ပါလား။ အင်း..နှစ်ယောက်တော့ရောက်လာပြီဟေ့။
နောက်တစ်ယောက်ကျန်သေး တယ်လို့ တွေးမိနေတုန်းရှိသေး။ အော်..နေရာတိုင်းမှာက ငါလုပ်မှကို ပြီးမြောက်ပါလားနော်။ တကယ်ဆို ဒီနေ့သွားရမယ့် ဆွမ်းကျွေးမှာ ငါမပါလည်း ဖြစ်နေတာပဲကို မလာမနေရဘူးဆိုတော့ ကဲပါလေ။ ကိုယ်လည်း သွားနိုင် လာနိုင်နေမှတော့ ငါမပါပြောနေပါဦးမယ် ရယ်လို့ တစ်ငါထဲငါနေတဲ့ ငါကောင် အပေါ်ကို ခင်တွယ်နေစေတဲ့ ဒိဋ္ဌါသ၀က တန်းရောက်လာပြန်တယ်လေ။ အင်း လောဘနဲ့ ဒိဋ္ဌိတော့ ရောက်နေပါပေါ့လား။
အင်း သူတို့တွေက မိုးလင်းကတည်းက တန်းပြီး ၀င်လာကြပါလား ဆိုတာကို ကိုယ်က စောင့်ကြည့်လို့သာ သိလိုက်ရတာပါနော်။ တော်တော်လည်း ၀ီရိယကောင်းကြတဲ့ ရန်သူတွေ ပါလားနော်။
ဒါနဲ့ သူတို့ကို ခိုင်းနေတာက ဘယ်သူများပါလိမ့်မယ်။ ခုထိမရောက်သေး ဘူးလားလို့ သေချာလေး ကြည့်လိုက်တော့မှ အမယ်…ကိုယ့်ထက်တောင် စောရောက်နေပါပေါ့လား။ ကိုယ့်ခန္ဓာ အိမ်ဦးခန်းထဲမှာ မိန့်မိန့်ကြီး ထိုင်လို့ သူ့တပည့်သုံးယောက်ကို ခိုင်းကောင်းနေတဲ့ ခေါင်းဆောင် ခေါင်ချုပ်ကြီးကို တွေ့လိုက်မှ အံအားသင့်သွားရပါ ပြီ။ ဟောဗျာရယ်။ ငါ့နှယ်နော်။ ခံလိုက်ရပြန်ပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောလှပြီထင် နေတာ။ ခုတော့ ကိုယ့်ထက် ရန်သူ ခေါင်းဆောင်က ဦးထားပြီးနေပါလား။
အော်…အ၀ိဇ္ဇာသ၀ဆိုတဲ့အတိုင်း သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သစ္စာလေးပါးကို မသိ၊ မမြင် တဲ့အပြင် သူများကိုလည်း သိမြင်ခွင့်မရအောင်ကို တပည့်သုံးယောက်ကို တာဝန်တွေခွဲလို့ ခိုင်းနေ လိုက်တာ။ ဒီရန်သူတပည့်သုံးယောက်ရဲ့ လက်ချက်နဲ့ပဲ ဒီခန္ဓာကြီးဟာ တစ်နေ့တစ်နေ့ မနားရ၊ မအားရအောင် လည်ပတ်ရဦးမှာပါလားဆိုတာ တန်းပြီး သိမြင်လိုက်ရပါတယ်။
အင်း ခေါင်းဆောင်နှင့်တကွ သူ့တပည့်လက်သား သုံးယောက်ကတော့ မိုးလင်း ကတည်း က ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာ တပ်စွဲထားပြီးနေလေပြီ။ ဒီ လက်အောက်က လွတ်ဖို့ကတော့ သူတို့အကြောင်း ကို သေချာသိမှသာ နည်းလမ်းရှာလို့ရမှာမို့ ခုလောလောဆယ်တော့ဖြင့် ဟန်မပျက် သူတို့ခိုင်း တာလုပ်ရင်းနဲ့ သူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာ အချက်အလက်တွေကို ထပ်ပြီးသိရအောင် လေ့လာရပေမည်။ ဒါ့ကြောင့် ခုတော့ ရန်သူ့လက်တွင်းကနေပဲ သူတို့ အသွားအလာကို သတိထားလို့ စောင့်ကြည့်ရပေဦးတော့မည်။
မှတ်ချက် – အ၀ိဇ္ဇာကို တရားကိုယ်ကောက်တော့ မောဟ။
အင်း ဒါဆိုရင်တော့ လောဘနဲ့ ဒိဋ္ဌိရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဂိုဏ်းချုပ်ကြီးကတော့ မောဟပဲပေါ့နော်။
အောင်မငီးးးးးး ဘာများလဲလို့… မောဟ ပေကိုး…
အချို့အရာတွေကို သူတို့အလိုအတိုင်းလုပ်ပေးနေမှ လောလောဆင်
ကိုယ်ကလောကီထဲမှာပဲ ကျင်လည်နေရတဲ့ ပုထုစဉ် တစ်ယောက်ဖြစ်နေသေးတာကိုး။
ဒါပေါ့။ကိုယ့်မှာနည်းလမ်းမရှာတွေ့သေးသ၍ကတော့ follow လိုက်ပြီး မီးစင်ကြည့်ကနေရဦးမှာပါပဲ။
ဪ…ခုလိုစဉ်းစားတွေဝေနေတာကိုက မောဟ ဘဲလေ။
တော်လိုက်တာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အချိန်မီ သတိနဲ့ တန်းထိန်းတတ်နေပြီပေါ့။
Who are you whowho? You,however,avery good teacher for me. I’ve already read almost all of your posts, giving you A+ you must have heard. Please keep on writing some more for us.
Out of your written work, I like ကိုယ်တွေ့လျှောက်လှမ်း ဓမ္မလမ်း most. Because of that one, I have been encouraged to focus on meditation. I owe youalot, my dear. Your Teacher Nu.
ကျနော် ခရီးလွန်နေလို့ ခုမှ အင်တာနက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ချက်ခြင်းအကြောင်းမပြန်ဖြစ်တာ ခွင့်လွတ်ပါ။ “ကိုယ်တွေ့လျှောက်လှမ်း ဓမ္မလမ်း”ဖတ်ရသူတို့အတွက် အားဆေးလေး ဖြစ်သွား မယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်လှပါပြီ။ ခုလို စာတွေဖတ်ပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ လိုအပ်ချက်များနှင့် အမြင်မတော် အတွေးမတော်တာများ ရှိခဲ့ရင် ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါကြောင်း…